बाबु जस्तो, छोरा पनि त्यस्तै… | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
‘बाबु जस्तो छोरो’ पनि त्यस्तै भन्ने भनाइ हामी सबैले सुनेका छौं । क्रिश्चिआनो रोनाल्डोका ७ वर्षीय छोराले यो भनाइलाई पुष्टि गरेका छन् ।
पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोका छोरा भर्खर ७ वर्षका मात्रै भएका छन् । उनको नाम क्रिश्चिआनो रोनाल्डो जुनियर हो । रोनाल्डो जुनियरको नाम मात्रै होइन, अन्य कुरा पनि आफ्ना बाबुसँग मिल्छ ।
केही समयअघि रोनाल्डाले आफ्ना छोराको एउटा भिडियो इस्टाग्राममा पोष्ट गरेका थिए । उक्त भिडियोमा रोनाल्डो जुनियरले सानदार रूपमा फ्रि किक हानेको सानो अंश पोष्ट गरिएको थिए । जुनियरले स्पेनमा भएको एक खेलमा उक्त फ्रि किक हानेका थिए । फुटबल खेल्ने उनको सीप र क्षमता देख्दा उनी पनि भविष्यमा बाबुजस्तै स्टार बन्ने सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
क्रिश्चिआनो रोनाल्डो सिनियरसँग फ्रि किक हान्ने विशेष क्षमता छ । सानै उमेरमा कुशलतापूर्वक फ्रि किक हान्न सक्ने उनका छोरा रोनाल्डो जुनियरसँग पनि बाबुको उक्त सीप र क्षमता स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उनले पनि रोनाल्डोले झैं सानदाररूपमा फ्रि किक हान्छन् । फ्रि किक हान्ने उनको शैली हेर्दा बाबुबाट यस्तो क्षमता उनमा सरेको जस्तो लाग्छ । रोनाल्डो जुनियरले पनि फ्रि किक हान्दा रोनाल्डोको शैलीमा प्रहार गर्छन् । बाबुले झैं खुट्टा र छाति फराकिलो पार्दै उनले फ्रि किक हान्छन् । उनले प्रहार गरेको बल पनि रोनाल्डोले प्रहार गरे झैं देखिन्छ ।
रोनाल्डो जुनियर को हुन् ?
चार जना सन्तानमध्ये रोनाल्डो जुनियर रोनाल्डोका पहिलो सन्तान हुन् । रोनाल्डो जुनियरलाई आफ्नी आमा को हुन भन्ने थाहा छैन। रोनाल्डोले आफ्ना छोराकी आमाबारे अहिलेसम्म केही खुलाएका छैनन् । अहिलेसम्म आफूले नै उनको हेरचाह र पालन पोषण बाबुले नै गर्दै आएका छन्
रोनाल्डो जुनियर सरोगेट मदरबाट जन्मेको हुन सक्ने अनुमान धेरैले गर्छन् । यसका लागि रोनाल्डोले एकजना अमेरिकी महिलालाई १० मिलियन युरो दिएको भन्ने खबर पनि बाहिर आएको थियो । तर यसबारे रोनाल्डोले अहिलेसम्म केही बताएका छैनन् । आफ्नो छोरा हुर्केपछि मात्रै उनलाई यसबारे जानकारी दिने रोनाल्डोले बताउँदै आएका छन् । – एजेन्सी